Paska ieren-doza : Manao hetsika an-dalambe ny DGSR - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversPaska ieren-doza : Manao hetsika an-dalambe ny DGSR
Paska ieren-doza : Manao hetsika an-dalambe ny DGSR
Mba ho Paska iren-doza ! Hanatanteraka hetsika fitsirihana ara-teknika ireo fiara mifamoivoy an-dalambe mandritra ny enina andro, manomboka anio 14 hatramin’ny 19 ny volana avrily ny Foibe fitsarana fiarakodia (DGSR) amin’ny alalan’ireo sampan-draharaha misahana ny hetsika sy fitsirihana ara-teknika an-dalambe sy ireo Ivon-toerana fitsarana fiarakodia manerana ny Nosy. Hiasa sy hisokatra ny Ivon-toerana fitsarana fiarakodia manerana ny Nosy ny asabotsy16 avrily izao manomboka amin’ny 8 ora maraina hatramin’ny 3 ora tolakandro ho fitsinjovana manokana ireo mpampiasa fiarakodia.
« Tafiditra indrindra ho fisorohana mialoha ny lozam-pifamoivoizana niseho lany tato ho ato sy ho fiarovana ny ain’ireo mpampiasa lalana rehetra. Famerenana ny fahatokisan’ny vahoaka fa miaro ny ainy sy ny fananany ny Zandarimariam-pirenena araka ny loha-hevitra nankalazana ny andron’ny Zandarimaria ny 2 avrily teo manao hoe « Namanao ny zandarimariam-pirenena fa tsy fahavalo ».
Mba hahafahan’ny olon-drehetra mankalaza ny fetin’ny Paska 2022 ampilaminana sy lavitry ny lozam-pifamoivoizana », hoy ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny fitsarana fiarakodia, ny jeneraly Arona Kassimo.
Araka ny fanazavana ihany, ho betsaka ny fianakaviana mana-pikasana hitondra fiara hisitaka sy hivoaka ny renivohitra,ka mandray andraikitra manoloana izany ihany koa ny avy amin’ny DGSR. « Ho fiarovana ny tontolo iainana, hojerena manokana ireo fiara mifamoivoy mamoaka setroka mihoampampana. Ho fampanarahan-dalana ny rehetra dia hisy ny fanaraha-maso manokana ny fivezivezen’ireo « tricycles » izay hita ho nihamaro sady miasa mitatitra olona ivelan’ny Renivohitra », hoy ny fanamafisana. Hojerena manokana ihany koa ireo mampiasa fiara mitondra laharana vahiny, indrindra ny laharana “wwt” ary ny fampiasana jiro be mahajambena na « Led» amin’ny alina. Eo ihany koa ny fanentanana sy fampahafantarana ny fandrarana ny fampiasana ny fitaratra matroka misy “pellicules”. « Tsy hisy ny fandeferana amin’ireo fiara hita fa tsy manara-dalàna ka mety hitera-doza satria “lahitokana ny aina” « , hoy ry zareo avy amin’ny DGSR.
Football – Christian Kely Rakotoarimanana : « Faire de l’UFICASM un sparring-partner des Barea ! »